Afrika, 31 October 2019
Khamiis 31 October 2019
Botswana: Mokgweetsi Masisi oo dib loogu doortay madaxtinnimada dalkaas
Xisbiga Dimuquraaddiga ee haya talada dalka Botswana ayaa ku guuleystay doorasho si weyn loogu loolamey oo dalkaasi ka dhacdey Arbacadii.
Jawar Mohamed oo ka hadlay xiisadda ka taagan Addis Ababa
Magaalada Addis Ababa ayaa waxaa maalmihii dhawaa ka jirey qalalaasiyo ay ku dhinteen saddex qof oo u dhexeeyey ciidamada amaanka iyo Jawar Mohamed oo ah nin ah nin sheegta inuu u dhaqdhaqaaqo danaha Oromada.
Muxuu salka ku hayaa khilaafka Masar iyo Itoobiya ee Nile?
Xiisaddii biyaha wabiga Nile ee u dhaxeysay dalalka Itoobiya iyo Masar ayaa mar kale cirka isku shareertay. Xiisaddan ayaa salka ku haysa biyo-xireen ay dhiseyso Itoobiya oo webiga Nile laga sameynayo.
Itoobiya; Xiisad u dhaxeysa Jawar Mohamed iyo ciidamada
Dalka Ethiopia waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo tallaabada dowladda Itoobiya ay ku dooneyso inay ilaalada kala noqoto Jawaar Maxamed.